के हो हाई कोलेस्टेरोल ? हाई कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपाय - NA MediaNA Mediaके हो हाई कोलेस्टेरोल ? हाई कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्ने घरेलु उपाय - NA Media
ओम मूर्ति अनिल
मंसिर २५ । कालेस्टेरोल रगतमा पाइने एक प्रकारको बोसो हो । रगतमा बोसोको मात्रा सामान्य भन्दा बढि भएमा सो बोसो रगतको नलिको भित्तामा बसेर नलिलाई साघुरो बनाउछ, जसले रक्तप्रवाहमा कमी हुनसक्छ । उच्च कालेस्टेरोलले मुटुको रक्तनली (कोरोनरी आर्टरी) साँघुरो भएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थालाई हर्टअट्याक भनिन्छ । युवाहरुमा देखिने हर्टअट्याकको प्रमुख कारण हाइ कालेस्टेरोल हो ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोग र मोटा मानिसलाई कोलेस्टेरोल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कोलेस्टेरोल बढी भएमा सुगर, रक्तचाप, थाइराइड र मुटुको जाँच गराउनु पर्छ । कालेस्टेरोल जाँच
यसले रगतमा राम्रो र नराम्रो दुबै कोलेस्टेरोलको पुरै मात्रा देखाउछ । यो परीक्षणबाट एलडिएल, एचडिएल वा ट्राइग्लीसराइड मध्ये कुन बढी छ भन्ने थाहा हुदैन । तसर्थ टोटल कोलेस्टेरोलको जाँचमात्र गरेर ढुक्क हुनुहुदैन ।
एलडिएल कोलेस्टेरोललाई नराम्रो कोलेस्टेरोल भनिन्छ । यो बढ्नु सबैभन्दा बढी खतरा मानिन्छ । एलडिएल कोलेस्टेरोलको मात्रा बढेमा यो रक्तनलीको भित्ता बसेर नलीलाई साघुरो बनाउछ । सामान्य मानिसमा एलडिएल कोलेस्टेरोल १३० भन्दा कम हुनुपर्छ र १६० भन्दा बढी भएमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मधुमेहका बिरामी, हर्टअट्याक भइसकेका र मुटुको रक्तनलिमा समस्या भएका बिरामीमा एलडिएल कोलेस्टेरोलको मात्रा १०० भन्दा कम हुनुपर्छ । एलडिएल कोलेस्टेरोलको मात्रा जति कम भयो हर्टअट्याकको सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ ।
सर्वप्रथम कोलेस्टेरोल बढ्ने कारण खोज्नुपर्छ । कोलेस्टेरोल बढ्ने पहिलो कारण चिल्लो खाना हो । त्यसैले पहिला खानामा सुधार गर्नुपर्छ । शाकाहारी खानामा कोलेस्टेरोल कम हुन्छ । तर फलफुल र सागसब्जिमा कोलेस्टेरोल नै हुदैन । दुध र दुधबाट बनेका पदार्थमा पनि कोलेस्टेरोल बढि हुने भएकाले यस्ता खाना पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोलेस्टेरोल घटाउन मासु र अण्डाको प्रयोग पनि कम गर्नुपर्छ । कोलेस्टेरोलको मात्रा अत्याधिक बढी छ भने औषधि सेवन गर्नुपर्छ । कोलेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रणमा आएपछि औषधिको मात्रा घटाउदै गएर बन्द पनि गर्न सकिन्छ । हाइ कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्ने ६ उपायहरु–
१) चिल्लो खाना कम खाने
२) फलफुल र सागसब्जि बढी खाने
३) नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने
४) तौल घटाउने
५) चुरोट र मदिरा छाड्ने
६) डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्ने –स्वास्थ्यखबरबाट